Ganacsigu Waa Hor’umarkeena – Hanoolaato Somalia National Party
Call Us 00252 618617455 info@hanoolaato.org
Ganacsigu Waa Hor’umarkeena
Ganacsiga Iyo Qorshaha Hanoolaato
Waan wada ognahay muhiimada uu ganacsiga leeyahay. Waxaan kaloo ogsoonahay muhiimada uu ganacsiga umaddeena Soomaaliyeed gaar ahaan uleeyahay. Soomaalida ganacsiga aad baan ugaga dheereynaa umadaha kale taasna waa barako Alle nabarakeeyay.Hadaba Hanoolaato aad bay u fududeynaysaa ganacsiga kan dalka gudahiisa iyo kan dalkeena iyo dalalka kale kadhexeeya labadaba. Waxaan uxil saaraynaa dad kutakhasusay ganacsiga in ay baaritaan inoo sameeyaan kow wax walba oo caqabad ku ah ganacsiga dalkeena dhexdiiisa iyo dibadiisaba iyo labo sida inoogu fudud oo aan ganacsiga ku dardar galin karno si ay umadeenu kaga faaideystaan. Waxaan waliba xooga saari doonaa doorka ay dowlada ka dheeli karto dardar galinta ganacsiga.
Maxaan Qaban Doonaa I.A
Cilmi baaritaan sidii aan ganacsiga u fududeyn lahayn
Dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha
Ladirirka musuqa iyo kutakrifalka awooda dowlada
Gacan qabasho ama kobcin warshadaha aan goaamino in ay muhiim uyihiin soo kabashada dalkeena
Maal galin sida bixin deyn ganacsi lagu bilaabo ama wax ka dhisid ganacsiyada waa weyn oo maal galin aad ubadan ubaahan muhiiimna u ah soo kabashada dalkeena
Xoojinta contract yada ay shirkadaha si aan kalsooni ugalino shirkadaha iyo maal kudarsiga muwaadiniinta shirkadaha taas oo aan dowlad ahaan balan qaadayno in hadii si sharci daro ah lacag tooda lagu qaato ay mas’uul dowlada iska saarayso soo celinta lacagtaas iyo ciqaabista dadkii sharciga ku xadgudbay
Inkastoo runtii wax badan ay inoo qabsameen oo dalkeena hada uu dakado iyo eerabooro caalami ah iyo kuwo lokol ah labadaba uu leeyahay oo ganacsiga wax badan inoo fududeyn kara, hadana dhinaca wadooyinka iyo dhismaha dalka intiisa kale ayaa wali wax badan ubaahan in laga qabto. Hanoolaato waxay xooga saari doontaa dhismaha wadooyinka isku xira magaalooyinka waaweyn iyo deegaamada wax soosaarka leh siiba beeraha. Waxaan kaloo dhisi doonaa wadooyinka waaweyn oo isku xira dalkoo dhan si ganacsiga iyo wax soosaarka laftigiisa uu dalka oo dhan ugu baaho oo meel walba oo dalkeena ka mid ah ay unoqoto meel qofkii raba uu dagi karo oo waxii uu rabo ka qabsan karo. Taariikhda waxay marqaati ka tahay in hadii wadooyinka meel walba la gaarsiiyo uu deegaanka laftigiisa fido oo ay soo baxaan magaalooyin badan iyo degmooyin badan oo cusub oo horey aan loo daggi karin. Waxaa kale oo aan dhisi doonaa ama fudedeyn doonaa dhismaha waxshadaha.
Ganacsiga waxaa kale oo aan ku caawinaynaa canshuurta, qorsheynta iyo maal galinta. Canshuurta waxay lasoconaysaa baahida dalkeena iyo dadkeena. Matalan, markii aan xooga saareyno beeraha iyo wax soosaar kooda, waxaan aad u dhimi doonaa amaba aan joojin doonaa canshuurta laga qaado soo galinta dalka qalabka beeraha. Dowlad ahaan waxaan aad u yareynaynaa wakhtiga uu muwaadinku ku faran karo ganacsi oo wixii uu dowlada ugaga baahdo ayaan si dhakhso leh oo fudud ugaga baahi tiraynaa. Matalan, diwaan galinta shirkadaha iyo ganacsiyada kale oo dhan oo intii aan online uwareejin karno aan uwareejinaynaa wixii aan loo wareejin karina waxaan raadinaynaa sidii online loogu wareejin lahaa ama sidii kale oo ugu fudud oo adeegaas aan shacab keena ugaarsiin lahayn.
… Halkaan riir …
Email kaaga halkaan ku qor si aad noola socotid
Liido Beach, Mogadishu, Somalia
Ololaha iyo Xafladaha
Naga Mid Noqo
Copyright © Hanoolaato. All Rights Reserved.